के खोज इन्जिन अनुकूलन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँछ?
तथ्याङ्कहरूको अनुसार, खोजी इञ्जिनहरूले व्यवसायिक मालिकहरूलाई बिक्रीमा बढ्ने पहिलो महीनामा 50% बढ्छ. एक सफल खोज इन्जिन अनुकूलन प्रोग्राम सामान्यतया तीन घटक समावेश गर्दछ:
तपाईंको साइटमा सम्भावित ग्राहकहरू ड्राइभिङ्ग गर्दै;
सम्भावित र सान्दर्भिक सन्देश सिर्जना गरी ती सम्भावनाहरू राख्नु;
नियमित ग्राहकहरूलाई वेबसाइट आगन्तुकहरू बदल्दै.
आजका लेखमा, म तपाईंलाई बताउन सक्ने केहि सजिलो चीजहरूको बारेमा बताउनेछु जो तपाईंको वेबसाइटको एसओओ दाहिने पालामा. तल तपाईको एसईओ कार्यक्रम सुधार गर्न शीर्ष सुझावहरूको एक सूची हो.
आफ्नो लक्षित श्रोतालाई पहिचान गर्नुहोस्
तपाईंको ग्राहकहरुलाई बुझ्न सक्रिय खोज इन्जिन अनुकूलन कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण भाग हो।. यदि तपाई लामो समयसम्म सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईका श्रोताहरूलाई थाहा छ - digital company lebanon. तपाईंको वेबसाइटको लागि एसईओ अभियान सुरु गर्नु अघि, सोच्नुहोस् जसलाई तपाईलाई आकर्षित गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ. एकपटक तपाईंले आफ्नो उत्कृष्ट बिक्री सम्भावनालाई पहिचान गर्नुभए पछि, कुन सामग्रीले ती मानिसहरूलाई आकर्षित गर्नेछ. उनीहरूको चाहना र आवश्यकताहरूमा ध्यान दिनुहोस्. त्यसपछि, तपाइँ कुन तरिकाले साइट आगन्तुकहरूलाई तपाईंको व्यवसायसँग जोड्न प्रोत्साहन दिन सक्नुहुन्छ भन्ने निर्णय गर्नुहोस्.
ध्यान राख्नुहोस्, तपाईका ग्राहकहरू प्राथमिक स्रोत हो जसमा तपाईंको व्यवसायको सफलता निर्भर छ. त्यसकारण यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईंले तिनीहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ. व्यावसायिक बिक्री विधिहरु र व्यक्तिगत विस्तार मा ध्यान केंद्रित लाभदायक ग्राहक सम्बन्धहरु को निर्माण को महत्वपूर्ण पहलू हो
तपाईंको वेबसाइट को गुणवत्ता को मूल्यांकन
तपाईंको आधार मा आधारित सामाग्री को मूल्यांकन ग्राहकहरु को इच्छाहरु, इच्छाहरु, आवश्यकताहरु, र प्राथमिकताहरु. निर्धारण गर्नुहोस् कि तपाइँसँग सबै प्रकारका ग्राहकहरूको लागि सामग्री छ. यदि होइन भने, त्यस सामग्रीको बारेमा सोच्नुहोस् कि वेबसाइटमा तपाईंको सम्भावना राख्न सम्भव छ.
प्रतिस्पर्धाको अनुसन्धान सधैं सही निर्णय हो. आफ्नो मुख्य प्रतियोगिहरु को साइटहरु को समीक्षा शुरू गर्नुहोस्. तपाईको शीर्ष खोजी कुञ्जीपाटीका लागि Google मा कत्तिको राम्रो मूल्याङ्कन गर्नुहोस्. सामान्यतया, त्यहाँ बजारमा केही प्रतियोगीहरू छन् जुन तपाईले पनि थाहा छैन. सौभाग्य देखि, तपाईं ती छिटो तिनीहरूलाई Google मा "समान साइटहरू" विशेषता प्रयोग गरेर पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ. आजकल, खोज इन्जिन सजिलै संग निर्धारित गर्न सकिन्छ कि कुन साइटहरु लाई उनको सामग्री को विश्लेषण र एक विशिष्ट संसाधन को इंगित लिंक को द्वारा समान हो.
सही खोजशब्दहरु को चयन गर्नुहोस
खोजशब्द अनुसन्धान कुशल खोज इंजन अनुकूलन कार्यक्रम को एक अन्य महत्वपूर्ण भाग हो।. तपाईले गर्नु पर्छ आफ्नो लोकप्रियता र प्रासंगिकताको आधारमा तपाईंको ब्रान्डको लागि बहुमूल्य कुञ्जी वाक्यांशहरूको पहिचान गर्दछ. आफैलाई आफ्नो ग्राहकको जूतामा राख्नुहोस् र तपाइँले प्रस्ताव गर्ने सेवाहरूको खोजी कसरी गर्ने भनेर बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्. सिमुल्ट विशेषज्ञहरूले सिफारिस गर्छन् कि तपाईं सही खोज सर्तहरूको पहिचान गर्दा निम्न सुझावहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ:
साइट तथ्याङ्क डाटा विश्लेषण गर्दै;
अवस्थित ग्राहकहरूसँग ब्रेनस्टर्मिङ;
वेबसाईट खोजी परिणामहरूको समीक्षा गर्दै;
प्रतियोगिहरु को साइटहरु को अन्वेषण;
पीपीसी अभियानको साथ परीक्षण साइट;
खोजशब्द अनुसन्धान प्रदर्शन गर्दा पेशेवर औजारहरू लागू गर्दै.
तपाईंको लिस्टमा क्लिक गर्न प्रयोगकर्ता प्राप्त गर्दै केवल आधा युद्ध हो।. तपाईंको स्रोतको लागि सम्भावनाहरू आकर्षित गर्दै एक सफल खोज इन्जिन अनुकूलन कार्यक्रममा मात्र पहिलो चरण हो. के उनीहरूले तपाईंको साइटमा आफ्नो आँखा पाउँदा के हुन्छ भने उनीहरूको ध्यान धारण गर्नको लागि पूर्णतया निर्भर हुन्छ. तिनीहरूले भन्थे, के तपाई चाहानुहुन्छ कडा कडा परिश्रम गर्नुहुन्छ - यो युद्ध बिना तपाईंलाई आउनेछैन.